China Environmental Friendly Thickener LH-312D soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Yiman Lanhua
LH-312E waa nooc ka mid ah polymer acrylate.Waxaa loo isticmaali karaa dhumucdii daabacaadda midabka, daabacaadda aan-dhogorta lahayn iyo daahan, sidoo kale diyaarinta iyo dhumucdiisuna dhammaan noocyada kala duwan ee xuubka, waxay leedahay hanti dhumuc wanaagsan iyo dhar ayaa muujinaya midab dhalaalaya.
-LH-312E waa nooc ka mid ah polymer acrylate.Waxaa loo isticmaali karaa dhumucdii daabacaadda midabka, daabacaadda aan-dhogorta lahayn iyo daahan, sidoo kale diyaarinta iyo dhumucdiisuna dhammaan noocyada kala duwan ee xuubka, waxay leedahay hanti dhumuc wanaagsan iyo dhar ayaa muujinaya midab dhalaalaya.
Samaynta koollada degdega ah.Dhaqso u dhufo
Saamiga samaynta koollada sare iyo iska caabinta elektrolytka wanaagsan.
Degenaansho sare oo dhejis ah oo la sameeyay, fududahay in la dhaafo shaashadda iyo dareeraha wanaagsan, caariyaysi la'aan.
Midab dhalaalaya iyo midab sare leh.
Saaxiibtinimada deegaanka, oo aan lahayn formaldehyde, APEO iyo kerosene.
Muuqashada Caano dareere viscous cad
Dabeecadda Ionic Anionic
LH-312E waxay ku habboon tahay daabacaadda midabka ama dhumucda nidaamka kale ee aqueous ama mucilage.
1. Habka daabacaadda Midabka:
Biyo ama kuwo kale Y %
1. Socodka geedi socodka: Diyaarinta koollada-Daabacaadda shaashadda Rotary ama fidsan-qallajinta (150-160 ℃, 1.5-3 min).
1. Soo jeedi in si gaar ah loo miisaamo oo loo milo marka la diyaarinayo koollada, siday u kala horreeyaan ugu dar oo si buuxda u walaaq ka hor intaanad isticmaalin.
Shabagga durbaanka caaga ah 130 kg, waxaa lagu kaydin karaa 6 bilood heerkulka qolka iyo xaaladda hermetic iyada oo aan la helin iftiinka qorraxda.Si loo hubiyo in tayada badeecada la ilaaliyo, fadlan hubi muddada uu shaqaynayo badeecada, waana in la isticmaalo kahor ansaxnimada.Weelka waa in si adag loo xiraa marka aan la isticmaalin.Waa in lagu kaydiyaa heerkulka caadiga ah ee qolka, ka hortagga soo-gaadhista daba-dheeraada ee kulaylka daran iyo xaaladaha qabowga, taas oo keeni karta kala-soocidda alaabta.Haddii alaabtu kala go'do, walaaq waxa ku jira.Haddii alaabtu barafaysan tahay, ku dhalaali xaalad diiran oo walaaq ka dib dhalaalidda.
Dhumucda Midabka Daabacaadda
Dhumucda synthetic ee Daabacaadda falcelinta
Dhuxusha Dharka Daabacaadda
Kaaliyeyaasha Kiimikada, Shaadhka Laastikada ah Khad Xariir Cad ah, Midabka Heerkulka Sare, Dhuxusha Kala firdhisan-La'aanta, Dheejinta Xakamaynta, Wakiilka Saabuunta Acrylic,